Qaramada Midoobay oo ka walaacsan abaaraha - BBC News Somali
Qaramada Midoobay oo ka walaacsan abaaraha
Image caption Abaar
Warbixin cusub oo ay soo saartay Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in 60 milyan oo qof oo ku nool daafaha dunida ay u baahan yihiin kaalmo degdeg ah, taasi oo ay sabab u tahay cimilada El Nino ee haatan jirta.
Xafiiska isku xirka Arrimaha Gargaarka ee Qaramada Midoobay ayaa sheegaya in kala bar dadka ay cimiladaasi saamaysay ay ku nool yihiin Koonfurta qaaradda Afrika, halkaa oo ay ka jirto abaartii ugu darneyd muddo tobaneeyo sana ah.
Warbixinta ayaa sheegaysa in 13 dal oo ku yaal Bariga iyo Koonfurta qaaradan Afrika ay abaaruhu saameeyeen, iyadoo culayska ugu daran uu saaran yahay dalka Itoobiya.
Halkaasi oo in ka badan 10 milyan oo qof ay si degdeg ah ugu baahan yihiin cunno gargaar ah, kaddib markii ay ku dhufteen abaaro ba’an, xaaladana ay uga sii dartay cimilada El Nino.
Qiimeynta ayaa lagu sheegay in cimilada isbadeshay, oo ah middii ugu xooganeyd ee la diiwaangeliyo, ay saameysay xilliyadii ay roobabka ka di’i jireen wadammada sida Zimbabwe, Suudaan, Soomaaliya iyo Lesotho, halka Malawi ay isugu darsameen abaar iyo daadad.
Warbixinta ayaa waxa ay sheegaysaa in dowladaha iyo hay’adaha caalamiga ahba ay caawinta sare u qaadeen, hasayeeshee si loo sii wado dadaalada gargaarka ayaa weli loo baahan yahay 2 bilyan oo doolar.
Warbixintu waxa ay ka digaysaa in xaaladda ay ku nool yihiin dad badan ay sii xumaan doonto lixda bilood ee ugu dambeysa sanadkan 2016-ka, haddii aanan la helin gargaar degdeg ah.